Ansixinta BF ee RW Rooble oo lasoo dhawaayay | KEYDMEDIA ONLINE
Farmaajo ayaa ku amaaney Ra'iisul wasaaraha cusub inuu yahay shaqsi uu ku aamini karo howsha uu u igmadey, isagoo uga mahadceliyay Gollaha Shacabka kalsoonida ay siiyeen.
MUQDISHO, Soomaaliya - Qaar kamida Wakiiladda Beesha Caalamka ayaa soo dhaweeyay kalsooni siinta Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble, iyagoo u rajeeyay inuu kasoo dhalaalo shaqada culus, ee loo dhiibay.
"Ergada Midowga Yurub ee Soomaliya waxay hambalyo u diraysaa Maxamed Rooble oo loo ansixiyay in u noqdo Raisul Wasaaraha Xukumada Federaalka Soomaliya. Waxaan u rajaynaynaa guul wax ku ool ah u ka gaaro dhabaha degaanashaha, ka wada qeyb qaadasho iyo in Soomaliya gaadho baraaro," ayaa lagu yiri Qoraal EU-da soo saartey.
Xafiiska UN-ka ee Muqdisho ayaa sidoo kale hambalyo u diray Rooble, iyadoo qoraal kasoo baxay UNSOM lagu sheegay in Ra'iisul wasaaraha uu la wareegay hogaanka xili adag, oo wadanka galay xaalada kala-guur.
"Qaramada Midoobey waxay Rooble ugu hambalyaynaysaa kalsoonida uu Baarlamanka siiyay, waxayna u rajaynaysaa guul maadaama uu la wareegayo hogaanka xiligii ugu adkaa taariikhda dalka. QM waxay la garab taagan tahay Rooble taageero, midnimo iyo wada-shaqeyn," ayaa lagu sheegay qoraalka UNSOM.
Sidaas oo kale, safiirka UK Ben Fender ayaa yiri: Hambalyo diirran ayaan u dirayaa Maxamed Rooble oo loo xaqiijiyay inuu noqday Raiisel wasaare. Waxaan rajeynaynaa inaan yeelan doono wada shaqeynta ugu dhow arrimaha mudnaanta leh, sida dib u habeynta dhaqaalaha iyo amniga, wax ka qabashada Al Shabaab iyo caawinta dadka nugul. Hambalyo!.
Ciidamada ammaanka ee Soomaaliland oo xabsiga utaxaabay Fannaan da’yar!
Warar 26 October 2020 21:09
Maamulka iskiis madax bannaanida ugu dhawaaqay ee Soomaaliland ayaa xabsiga utaxaabay Fannaan da' yar oo lagu magacaabo Qamar Suugaani, kaasoo maalmahan aad uga soo muuqanayay masraxyada Soomaalida.